PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - ABANQOBE I-AFCON NGOWE-96 BAGXEKA I-BAFANA
ABANQOBE I-AFCON NGOWE-96 BAGXEKA I-BAFANA
UDOCTOR “16 V” Khumalo ukhala ngokungazinikeli kwabadlali bebafana Bafana ephoxe iningizimu Afrika iguqiswa yisenegal ngo-2-0 okuwaqede nya amathuba ayo okungena emqhudelwaneni wendebe yomhlaba ozokuba ngonyaka ozayo erussia.
Umdlalo webafana nesenegal ubungolwesihlanu ebusuku epeter Mokaba Stadium, epolokwane, kanti elakuleli bekumele liwunqobe kumnyama kubomvu ukuzigcina lisesembangweni wokuya erussia kodwa lavele lashaya udaka.
Isenegal isilitholile ithikithi lokuyobhekana nezinye izingqungqulu erussia yize isasalelwe wumdlalo wokugcina wamaqoqo ezowugijima nebafana ngolwesibili ngo-21h30 ekuhambeni, estade Leopold Senghor.
Ukuhlula ibafana kwesenegal kwenze yanqoba ugroup D ngamaphuzu ali-11 kwazise ngeke isaficwa muntu njengoba iburkina Faso ihlezi endaweni yesibili ngayisi-6 kanjalo necape Verde inawesibalo esilinganayo kweyesithathu bese kuvala ibafana ngamane emidlalweni elinganayo eyisi-5. Iburkina Faso izovala ngokubhekana necape Verde ngolwesibili ngo-21h30 estade du 4-Aout, eburkina Faso.
Ukhumalo - ozakhele olukhulu udumo eyibamba esiswini sebafana inqoba i-africa Cup of Nations (Afcon) ngowe-1996 kuleli - uthi abadlali bakuleli kabayikhombisi intshisekelo yokulwela ukunqoba yonke imidlalo abayigijimayo njengoba kwakwenzeka kubona.
“Ngisho umdlali egeja igoli elilula uyaye uzibonele nje ukuthi akanakho ukuzisola okungako,” kuphawula ukhumalo obethathwa njengojenene wokuphaswa kwebhola ngezikhathi zakhe futhi ebhoke nangomjiko oxoxa indaba.
Le ngwazi ibivumelana nomark Williams owashaya amagoli amabili anqobisa ibafana owamanqamu we-afcon ngowe-1996. Uwilliams uthe bayadingeka abagadli bakudala kwibafana ukuyosiza abamanje ngamasu okuqobela amagoli. Uthi izandla zivulekile kuyena nxa edingeka noma kulandwe uphilemon “Chippa” Masinga odlale kuleli nase-europe eshaya amagoli amqoka.
Nolucas “Rhoo” Radebe obeyisiqongqwane kwibafana yangowe-1996, uhlabe izitobha zaleli qembu ngokuhluleka ukumaka ngendlela. Ubuze ukuthi ikusasa lebafana libhekephi uma isalanda umorgan Gould nosiphiwe “Shabba” Tshabalala akholwa wukuthi sesiphelile isikhathi sabo kuleli qembu.
Umasinga uthi ubesethemba lesi sikwati sikastuart Baxter. Ukhale ngebhadi ezeseka ngokuthi bekufanele lesi sikwati sihlohle amagoli amabili alula ebalula elikalebogang Manyama elingqubuze ipali labuyela ensimini nelikathemba Zwane elivinjwe ngunozinti wesenegal maqede layowela kupercy Tau ohlulekile ukulibhajiswa ezintanjeni. Nokho lezi zingwazi zivumelane ngokuthi zisamethemba ubaxter ukuba aqhubeke nomsebenzi wokucija ibafana.
KWEHLULE noma sebemhlanganisela kanje usadio Mane wesenegal neliverpool abadlali bebafana Bafana kodwa wagcina ekwazile ukusiza izwe lakhe lanqoba ngo-2-0 emdlalweni wokuhlungela indebe yomhlaba obusepeter Mokaba Stadium ngolwesihlanu ebusuku.